प्रकाशन र चित्र अधिकार | Law & More B.V.
ब्लग » प्रकाशन र चित्र अधिकार
प्रकाशन र चित्र अधिकार
२०१ 2014 को विश्वकपमा सबैभन्दा चर्चित विषयहरू मध्ये एक। रोबिन भ्यान पर्सी जसले स्पेनको बिरुद्ध स्कोरलाई बराबरी गरी सुन्दर हेडरको साथ ग्लाइडिive डाइभमा। उसको उत्कृष्ट प्रदर्शनको परिणामस्वरूप Calvé को विज्ञापन पनि पोष्टर र व्यावसायिकको रूपमा देखा पर्‍यो। वाणिज्यिकले। बर्षे पुरानो रोबिन भ्यान पर्सीको कहानी बताउँछ जसले एक्सेलियरमा उस्तै प्रकारको ग्लाइडिंग डाइभको साथ आफ्नो प्रविष्टि कमाउँछन्। रोबिन सम्भवतः व्यावसायिकको लागि राम्रोसँग भुक्तान गरिएको थियो, तर के यो प्रतिलिपि अधिकारको प्रयोग पनि पर्सीको अनुमति बिना अनुकूलित र परिमार्जन गर्न सकिन्छ?
पोर्ट्रेट दायाँ प्रतिलिपि अधिकारको हिस्सा हो। प्रतिलिपि अधिकार ऐनले पोर्ट्रेट अधिकारका लागि दुई अवस्थाहरू छुट्ट्याउँदछ, अर्थात् एउटा चित्र जुन कार्यमा बनाइएको थियो र एक पोर्ट्रेट जुन कार्यमा बनाइएको थिएन। दुबै स्थितिका बीचमा प्रकाशनको परिणाम र त्यसमा संलग्न पक्षहरूको अधिकारमा ठूलो भिन्नता रहेको छ।
जब हामी सही चित्रको कुरा गर्छौं? यस प्रश्नको जवाफ दिनु अघि पोर्ट्रेट सही के हो र यो दायाँ कति टाढा पुग्छ, पहिलो स्थानमा पोर्ट्रेट के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ पहिले दिनुहोस्। विधानको वर्णनले पूर्ण र स्पष्ट विवरण दिदैन। एक पोर्ट्रेट को लागी एक विवरण दिइएको छ: 'व्यक्तिको अनुहारको छवि, शरीरको अन्य भागहरूको बिना वा बाहेक, जुनसुकै तरिकामा यसलाई बनाइएको छ'.
यदि हामी यो व्याख्या मात्र हेर्छौं भने, हामी सोच्न सक्छौं कि एउटा चित्रमा एक व्यक्तिको अनुहार मात्र समावेश छ। यद्यपि यो केस होइन। संयोगवश, थप: 'जुनसुकै तरिकाले यो बनेको छ' भनेको यो पोर्ट्रेटको लागि फरक पर्दैन कि यो फोटो खिचेको छ, चित्रित गरिएको छ वा अरू कुनै पनि ढाँचामा डिजाइन गरिएको हो। एउटा टेलिभिजन प्रसारण वा क्यारीकेचर यसैले पोर्ट्रेटको दायराभित्र आउन सक्छ। यसले स्पष्ट पार्दछ कि शब्द 'पोर्ट्रेट' को दायरा फराकिलो छ। पोर्ट्रेटमा भिडियो, चित्रण वा ग्राफिक प्रतिनिधित्व पनि समावेश छ। यस विषयमा सम्बन्धमा बिभिन्न कार्यवाही गरिएको छ र सर्वोच्च अदालतले अन्तमा यसबारे विस्तृत रूपमा विस्तृत रूपमा भनेको छ: 'चित्र' भन्ने शब्द कुनै व्यक्तिको पहिचान योग्य ढ manner्गमा चित्रण गरिएको छ। यो मान्यता अनुहारको सुविधा र अनुहारमा पाउन सकिन्छ, तर यो केहि अरूमा पनि फेला पार्न सकिन्छ। सोच्नुहोस्, उदाहरण को लागी, एक विशेषता आसन वा केश को। वरपरका मानिसहरूले पनि भूमिका खेल्न सक्छन्। एक व्यक्ति जो भवनको अगाडि हिडिरहेको छ जहाँ व्यक्ति काम गर्दछ उसले चिनिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ जब त्यस व्यक्तिको चित्रण गरिएको थियो जहाँ उनी वा उनी सामान्यतया कहिल्यै जाने छैनन्।
पोर्ट्रेट अधिकारको उल्लंघन हुन सक्दछ यदि चित्रण गरिएको व्यक्तिको तस्वीरमा चिन्न सकिन्छ र यो पनि प्रकाशित हुन्छ। यो पोर्ट्रेट कमिसन गरिएको थियो कि हुँदैन भनेर निर्धारण गर्न अनिवार्य छ र गोपनीयता अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता माथि व्याप्त छ कि। यदि एक व्यक्तिले पोर्ट्रेट कमिसन गरेको छ भने, चित्र मात्र सार्वजनिक गर्न सकिन्छ यदि प्रश्नमा व्यक्तिले अनुमति दिएको छ भने। जबकि कामको प्रतिलिपि अधिकार पोर्ट्रेटको निर्मातासँग सम्बन्धित छ, उसले अनुमति बिना सार्वजनिक गर्न सक्दैन। सिक्काको अर्को पक्ष यो हो कि चित्रित गरिएको व्यक्तिको पनि चित्रको साथ सबै कुरा गर्न अनुमति छैन। अवश्य पनि, चित्रित व्यक्तिले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि पोर्ट्रेट प्रयोग गर्न सक्दछ। यदि चित्रित व्यक्तिले चित्र सार्वजनिक गर्न चाहन्छ भने, उसले यसको सिर्जनाकर्ताबाट अनुमति लिनुपर्दछ। जे भए पनि, सिर्जनाकर्तासँग प्रतिलिपि अधिकार छ।
प्रतिलिपि अधिकार कानून को धारा २१ को अनुसरण, निर्माता सिद्धान्त मा स्वतन्त्र रूपमा चित्र प्रकाशित गर्न को हकदार छ। यद्यपि यो पूर्ण अधिकार होइन। अधीन व्यक्तिले प्रकाशनको बिरूद्ध कार्य गर्न सक्दछ, यदि र त्यस हदसम्म कि उसले त्यसो गर्न उचित चासो राख्छ। गोपनीयता को अधिकार अक्सर एक उचित ब्याज को रूप मा दर्साईन्छ। प्रख्यात व्यक्तिहरू जस्तै खेलाडी र कलाकारहरू, व्यावहारिक चासोको साथसाथै, प्रकाशन रोक्न व्यावसायिक रुचिहरू पनि हुन सक्दछन्। वाणिज्य चासोको साथसाथै, सेलिब्रेटीको पनि अर्को रुचि हुन सक्छ। सबै पछि, त्यहाँ एक संभावना छ कि उसले / उसले प्रकाशनको कारण उसको / उनको प्रतिष्ठामा नोक्सान पुर्‍याउने छ। "उचित ब्याज" को अवधारणा व्यक्तिपरक हो र दलहरू सामान्यतया रुचिमा सहमत हुन हिचकिचाउँदछन्, तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि यस अवधारणाको बारेमा धेरै कार्यवाहीहरू भइरहेको छ। त्यसोभए अदालतले निर्धारण गर्नु पर्छ कि चित्रण गरिएको व्यक्तिको चासो निर्माता र प्रकाशकको ​​रुचिमा व्याप्त छ कि छैन।
निम्न मैदानहरू पोर्ट्रेट अधिकारको लागि महत्त्वपूर्ण छन्:
यदि हामीले रोबिन भ्यान पर्सीको उदाहरणलाई हेर्‍यौं भने, यो प्रस्ट छ कि उसले आफ्नो प्रख्यात ख्याती पाउँदा व्यावहारिक र व्यावसायिक दुवै चासो छ। न्यायपालिकाले यो निर्णय गरेको छ कि शीर्ष एथलिटको आर्थिक र व्यावसायिक चासोलाई प्रतिलिपि अधिकार ऐनको धारा २१ को अर्थमा उचित ब्याजका रूपमा लिन सकिन्छ। यस लेखको आधारमा, चित्रको चित्रण गरिएको व्यक्तिको सहमति बिना चित्रको प्रकाशन र प्रजननको अनुमति छैन, यदि त्यस व्यक्तिको व्यावहारिक रुचि खुलासाको विरोध गरिएको छ भने। शीर्ष एथलीटले व्यावसायिक उद्देश्यको लागि आफ्नो पोर्ट्रेट प्रयोग गर्नका लागि अनुमति लिनका लागि शुल्क लिन सक्दछ। यस तरिकाबाट उसले आफ्नो लोकप्रियतालाई पनि क्यापिट गर्न सक्दछ, यसले प्रायोजन सम्झौताको रूप लिन सक्छ, उदाहरणका लागि। तर एमेच्योर फुटबलको बारेमा के भन्न सकिन्छ यदि तपाईं कम प्रसिद्ध हुनुहुन्छ? केहि परिस्थितिहरूमा पोर्ट्रेट अधिकार पनि एमेच्योर शीर्ष एथलीटहरूमा लागू हुन्छ। भ्यान्डरल्याड / प्रकाशन कम्पनी स्पार्नेस्ट्याडको फैसलामा एक एमेच्योर एथलीटले साप्ताहिक पत्रिकामा आफ्नो पोर्ट्रेटको प्रकाशनको विरोध गर्‍यो। पोर्ट्रेट उनको कमीशन बिना नै बनेको थियो र उसले अनुमति प्रदान गरेको छैन वा प्रकाशनका लागि आर्थिक क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको छैन। अदालतले विचार ग .्यो कि एमेच्योर एथलीट पनि आफ्नो लोकप्रियतामा नगद लिन पाउने हकदार छ यदि त्यो लोकप्रियता बजार मूल्य छ भने।
यदि तपाइँको रुचिहरु को उल्लंघन भएको देखिन्छ, तपाइँ प्रकाशन मा प्रतिबन्धको मांग गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो पनि सम्भव छ कि तपाइँको छवि पहिले नै प्रयोग गरीएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईं क्षतिपूर्ति दावी गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्षतिपूर्ति सामान्यतया धेरै हुँदैन तर धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। पोर्ट्रेट अधिकारको उल्ल against्घनको बिरूद्ध कारबाही गर्न चार विकल्पहरू छन्:
अमूर्त घोषणाको साथ समन पत्र
नागरिक कार्यवाहीको लागि समन
जब यो स्पष्ट हुन्छ कि कसैको चित्रको अधिकार उल्लंघन भइरहेको छ, अदालतमा अरु प्रकाशनहरु जति सक्दो चाँडो हुन सक्दछ, यो महत्वपूर्ण हुन्छ। स्थितिमा निर्भर रहँदा, यो पनि सम्भव छ कि प्रकाशनहरू व्यावसायिक बजारबाट हटाइयो। यसलाई रिकल भनिन्छ। यो प्रक्रिया अक्सर क्षतिको लागि दाबीको साथ हुन्छ। सबै पछि, पोर्ट्रेटको ठीक विपरीत कार्य गरेर, चित्रित गरिएको व्यक्तिले क्षति भोग्न सक्छ। क्षतिपूर्ति कत्तिको उच्च क्षतिमा पुगेको क्षतिकोमा भर पर्दछ, तर पोर्ट्रेटमा र व्यक्तिमा चित्रित गरिएको तरिकामा। प्रतिलिपि अधिकार ऐनको धारा under 35 अन्तर्गत जरिवाना पनि छ। यदि पोर्ट्रेट अधिकार उल्ल .्घन भयो भने, चित्र अधिकार को अपराधी उल्लंघन को दोषी छ र उसलाई / उनको जरिवाना गरिनेछ।
यदि तपाईंको अधिकार उल्ल .्घन गरिएको छ भने, तपाईं क्षतिको दाबी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं यो गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंको छवि पहिले नै प्रकाशित भइसकेको छ र तपाईंलाई विश्वास छ कि तपाईंको चासोको उल्ल .्घन भएको छ।
क्षतिपूर्तिको रकम अक्सर अदालतले तोक्नेछ। दुई प्रख्यात उदाहरणहरू “स्किफोल टेररिस्ट फोटो” हुन् जसमा सैनिक पुलिसले मुसलमान उपस्थित भएका एक व्यक्तिलाई सुरक्षा जाँचको लागि छानिएको थियो जसको चित्रको तस्विरमा रहेको “शिपोल अझै सुरक्षित छ?” र रेलको लागि जाँदै गरेका एक व्यक्तिको अवस्था रेड लाइट जिल्लाको तर्फबाट फोटोशपमा छापिएको थियो जुन "वेश्याहरुमा हेर्दै" शीर्षक अन्तर्गत अखबारमा टु .्गिएको थियो।
दुबै केसहरूमा यो न्याय गरिएको थियो कि गोपनीयताले फोटोग्राफरको बोल्ने स्वतन्त्रतालाई तोकिदियो। यसको मतलव तपाईले सडकमा लिने प्रत्येक फोटो मात्र प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्न। सामान्यतया यस प्रकारका शुल्कहरू १1500०० देखि २ fees०० युरो बीच हुन्छन्।
यदि, उचित ब्याजको अतिरिक्त, त्यहाँ एक ब्याज ब्याज पनि छ, क्षतिपूर्ति धेरै बढी हुन सक्छ। क्षतिपूर्ति त्यसपछि यो यस्तै कार्यमा मूल्यवान हुन केमा निर्भर गर्दछ र त्यसकारण हजारौं युरोको राशि हुन सक्छ।
सम्भावित प्रतिबन्धहरूलाई ध्यानमा राख्दै, चित्रहरू प्रकाशित गर्दा होसियारीसाथ काम गर्नु बुद्धिमानी हो र सम्भव भएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अनुमति प्राप्त गर्न पहिल्यै अनुमति लिनुपर्दछ। सबै पछि, यसले पछि धेरै छलफललाई बेवास्ता गर्दछ।
यदि तपाईं चित्र अधिकार को विषय को बारे मा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ वा यदि तपाई बिना अनुमति के केहि चित्रहरु को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, वा यदि तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ कि कसैले तपाईको चित्र अधिकार उल्लंघन गरिरहेको छ भने तपाईका वकिलहरुलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। Law & More.
अघिल्लो पोस्ट बच्चाहरूसँग सम्बन्धविच्छेद
अर्को पोस्ट एक कम्पनी निर्देशक को बर्खास्त